Orinasa mandavantaona Mpanamboatra borosy Hydraulika Crawler China, mpamatsy
SM-300 Rig dia crawler mitaingina ny rig hidrolika ambony. Izy io no volavolan-tsarimihetsika vaovao noforonina sy novokarin'ny orinasanay.
SM1100 Hydro crawler drill
SM1100 feno fandavahana famonoana hydraulic rigs dia namboarina miaraka amin'ny lohan'ny rotary-percussion rotary na lozam-pifandimbiasana torque lehibe ho solon'ny safidy, ary miaraka amin'ny marotoa eny ambanin'ny lavaka, izay natao ho an'ny fiasa famoronana lavaka isan-karazany. Izy io dia mety amin'ny toe-javatra samihafa amin'ny tany, ohatra, ny vatokely, ny vatolampy, ny rano anaty rano, ny tanimanga, ny fasika sns ... Ity rigy ity dia ampiasaina amin'ny fitrandrahana fihodinana fihodinana sy ny fandavahana fihodinana ara-dalàna amin'ny tetik'asa fanohanana amin'ny bolt, fanohanana ny sisin-tany, fanamafisana orina, loaka ny rotsakorana sy ny antontam-bokin'ny mikraoba ambanin'ny tany, sns.
SM1800 fandavahana famonoana Hydraulika
SM1800 A / B hydraulic crawler drills, mampiasa teknolojia hydraulic vaovao, miaraka amin'ny fanjifana rivotra ambany, torque rotary lehibe ary mora amin'ny lavaka fiovana miovaova kely. Mety indrindra amin'ny fitrandrahana misokatra, ny fiarovana ny rano ary ny tetikasa lavaka hafainganina.
MEDIAN Tunnel Multifunction Rig dia rig fandavahana tonelina maro karazana. Miara-miasa amin'ny France TEC izy io ary manamboatra milina manara-penitra vaovao sy mandeha ho azy. MEDIAN dia azo ampiasaina amin'ny tetikasa tonelina, ambanin'ny tany ary isan-karazany.